Iprojekthi yeeflethi zaseCalifornia ziya kunceda iApple iphumeze iinjongo zayo eziluhlaza | Ndisuka mac
Xa iApple ibeka usukelo, ayinikezeli kwimizamo yayo de ibe ifezekisiwe. Ukuba kwaphakanyiswa kwithuba elithile eladlulayo ukuba kwiminyaka elishumi ukukhutshwa kwekhabhoni yi-0%, kusendleleni kuba ngoku inkampani sele ingathathi cala kolu hlobo lokukhutshwa. Kodwa ikwayinjongo zayo ayimisi "apho" kuphela. Ilindele ukuba ababoneleli bayo babe luhlaza njengenkampani ngokwayo, kwaye ikwafuna ukugqibezela enye yeeprojekthi zayo ezinamabhongo, ezibandakanya indawo yokugcina ibhetri enkulu eMelika. Iprojekthi yeCalifornia Flats.
Sele sithethile izihlandlo ezininzi ukuba iApple ingaphezulu kwenkampani yetekhnoloji. Thatha unonophelo olukhethekileyo kubucala babasebenzisi, ulwe nabantu abancinci kunye nokufuna okusingqongileyo uhlonitshwe kwaye ukhathalelwe kangangoko. Njengenkampani yobuvulindlela, inoluhlu lweembopheleleko ngokubhekisele eluntwini. Enye yazo luphuhliso oluzinzileyo kwaye ngenxa yoko ifuna ukuba yinkampani yokuqala emhlabeni engayikhuphi ikhabhoni. Yenzelwe yona umisele umda wonyaka wama-2030 Kwaye oku kufuna uninzi lotyalo-mali kunye noncedo oluvela kwezinye iinkampani.
Kungenxa yoko le nto iApple ifuna ababoneleli bayo ukuba babe kwindalo ngangokunokwenzeka, bathobele uthotho lweeprotocol ukuze babe ngononophelo ngakumbi nokusingqongileyo. Kodwa kuya kufuneka uzingqonge ngezinye iiprojekthi ezibalulekileyo zendalo. Enye yazo ibizwa ngokuba ziiCalifornia Flats ezijolise ekwenzeni eyona ndawo inkulu eMelika, ukuze yenze indawo yokugcina ibhetri. Yiprojekthi ye ukugcinwa kwamandla kumgangatho wegridi Iya kukwazi ukugcina iimegawathi ezingama-240 zamandla, ezoneleyo ukunika amandla kumakhaya angaphezu kwama-7.000 ngosuku olunye.
Le projekthi iza kuxhasa esele ikho Iifama zelanga elimegawathi ezili-130 inkampani eCarlifonia, ebonelela onke amandla e-Apple ahlaziyiweyo kurhulumente.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iprojekthi yeCalifornia Flats iya kunceda iApple iphumeze iinjongo zayo eziluhlaza